Ọnụọgụ nke akwụkwọ akụkọ | Martech Zone
Mbibi nke akwụkwọ akụkọ
Fọdụ ndị folks nọ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ ga-achọ ka ha ruo uju maka ha. Ezie na m ka na-ahụ n'anya isi nke akwụkwọ akụkọ na ịhụnanya ọkachamara oru nta akuko, ụlọ ọrụ ahụ bụ na m na-enwe ekele ruo mgbe ebighị ebi maka ị nweta buut. Agaghị m aga n'ihu banyere ya… m gara aga posts Ebe a, Ebe a, Ebe a na Ebe a mara mma nke ukwuu kpuchie ya!
Agbanyeghị na ọganihu a na-apụghị ịgbagha agbagha nke oge na mmalite nke teknụzụ, ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ na-agakarị na-egosi na ọ dabara na ihe ụwa niile, ịntanetị. Ebe ọ bụ na ọ dị mfe nghọta n'ụwa niile, ịdị mfe nke nnweta na ewu ewu n'etiti ndị ntorobịa maara ihe nke ọma, ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ enwewo ọdịda dị egwu na mgbasa na mmefu mgbasa ozi, na-ajụ ajụjụ na-akpali akpali "enwere ọdịnihu maka akwụkwọ akụkọ?" Site na Infographic: Akwụkwọ akụkọ ahụ jụ
Tags: mgbasa ozi mgbasaakwụkwọ akụkọ infographicakụkọ
I Kwesịrị Market to Keywords with No Search Volume?
Etu otu o si eme ka mgbanwe ire ahia